Fekradaha Somali Links Contact Us Magaalada Muqdisho Oo Habeeynkii Xalay Madaafiic Laga Hoyan
Duqeyn Madaafiic xoogan oo dhimasho iyo dhaawac geeystay ayaa xalay loo geystay degmooyinka Shibis iyo Boondheere, iyadoo duqeynta aheyd madaafiic Hoobiyeyaal ah oo aan la ogeyn halka ay ka soo dhaceysay.
Duqeynta oo bilaabatay xalay saqdii dhexe abaarihii 1:30 ayaa madaafiicda oo ahaa kuwo si is-daba joog u soo dhaceysay ayaa waxay ku hoobatay guryo dad rayid ah ay si nabad ugu hurdayeen. Inta la og yahay afar-ruux oo ay ku jirtay Haweeney Umul ah ayaa ku dhimatay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyntii xalay, waxaana madaafiic ku dhacday Kaam ku yaal degmada Boondheere oo lagu magacaabo Buulo maqaar ay qasaaraha ugu badan ka dhalatay. Tirada Kaamka ku dhaawacantay ayaa la sheegay inay gaarayeen 10-ruux oo ay ku jireen caruur, waxaana markii dadka la geeyay Isbitaalada la sheegay in labo ruux ay geeriyoodeen. Waxaa jira Hoobiyeyaal aan qarxin oo ku dhex jira kaamka, kaasoo saraakiisha booliska oo gaaray halka wax ka dhaceen ay ku wargeliyeen inay ka fogaadaan. Mid ka mid ah ruux qoyskiisa ay ku waxyeeloobeen duqeynta ayaa sheegay inay ka dhaawacmeen qoys ka koobay lix ruux oo ay ku jirtay walaashiis iyo saddex caruur ay dhashay loola cararay Isbitaalada Muqdisho. Goobaha madaafiicda ku dhaceen ayaa waxaa ka mid ah Suuqa Maana Booliyo,
halkaasoo uu ku dhintay wiil dhalinyaro ah oo ku lahaa dukaan ganacsi, iyo dhaawaca labo kale oo waardiyaasha suuqa ahaa. Lama oga halka uu sida rasmi ah ugu abaarnaa duqeynta, iyadoo saaka dadka ku nool xaafadaha Shibis iyo Boondheere ay hadal hayaan duqeynta ku soo dhacday, kaasoo ay hurdada kaga salaleen. Ma jirin wax jawaab ah oo ay ka bixiyeen Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo xilliyadii hore jawaabo culus ka bixin jireen marka la soo duqeeyo, mana cada halka ay ka yimaadeen duqeyntan. Related Items	Wafdi ka socda Baarlamaanka Soomaaliya oo booqanaya Dadka ka barakacay Muqdisho. Shineemo ku taalla degmada Afgooye oo xalay qarax lala beegsaday iyadoo dad aysan wax ku noqon. C/laahi Yuusuf oo maanta ku sii jeeda Magaalada Dakaar ee Dalka Sinigal. Gudiga Ganacsatada Suuqa Bakaaraha oo sheegay in xarumaha dowlada laga Soo riday madaafiicdii shalay lagu garaacay Suuqa Bakaara Dad rayid ahaa oo ku geeriyooday madaafiic lagu garaay suuqa wayn ee Bakaaraha. Xildhibaan Bare Hiiraale oo ka war bixiyay isaga xildhibaanda ka tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya safarkii ay ku tageen Magaalada B/dheere Q.M. Oo laga Dalbaday in ciqaab la mariyo dadka dhibaatada ka geeysnaya dalka Soomaaliya. Ciidamo Itoobiyaan ah oo xalay fiidkii Howlgalo ka sameeyay Xaafado ka tirsan Degmada Dayniile. Xaalada wadooyinka soo gala Suuqa weyn ee Bakaaraha oo laga dayrinayo iyo rasaas laga maqlayo. Wiil Soomaaliyeed oo lagu dilay magaalada Liverpool ee dalka Britain. MOST READ Maydka nin loo gowracay Sida Xoolaha oo kale ayaa saaka la soo dhigay Isgoyska Bakaaraha Muqdisho(Daawo Sawiro Naxdin leh). Views:35609 Daawo Dhegeyso Buraanbur Wadani ah. Views:20992 Somalia: Somaliland and the 'London Conference' - Silanyo Must Challenge Denial of Somaliland's Rights Views:20836 GAALAYSIINTA QAXOOTIGA SOOMAALIDA EE KENYA (WAR-BIXIN). Views:10585 Muuqaalka Soomaaliya Sanadka 2008!!!(Daawo Sawiro badan) Views:9841 cabdibile Views:7975 Soomaalida Finland oo Baaritaan caafimaad oo lacag la´aan ah lagu sameynayo(Warbixin Muhiim ah) Views:7428 LATEST ADDED Shabaab oo Hiiraan ku dishay dad isugu jiraa waayeel iyo caruur. War Saxaafadeed: Maxamed Saalax Anaadif iyo Saacid oo ka hadlay amaanka Mowshinkii ka dhanka ahaa Saacid oo laga laabtay kadib diblamaasiyad adag oo loo Miyiga oo laga bilaabay Cunida dalac Bilaashka & Canjeerada. (Maxaasa Kaqabsaday Arintaas) Xildhibaan muujiyay dareen ah in dadka Kismaayo Qaarkood Shabaab ku biirayaan. Xildhibaanada waday Mowshinka ka dhanka ah Saacid oo ka cawday lacago lagu kala diray. AMISOM oo ka dhawaajisay Qorshe Cusub oo kanixiyay Qaswadayaasha Maamulka Somaliland oo Waji gabax kale kala kulmay M/Yurub Banaanbaxyo kadhan ah Mooshinka Xukuumada oo Muqdisho gil gilay Xildhiban Dhalxa oo kamid ah xildhibanada Mooshinka waday oo kashifay Sir Culus